Aung's Investment: 2009
Posted by Aung Myo Htet at 11/20/2009 10:45:00 AM3comments
MZTရဲ့ Commentကနေ ရေးသင့်တယ်ထင်တာ ရေးလိုက်ပါတယ်။ တခါမှ Investingမလုပ်ဘူးတဲ့သူ၊ Stock Tradingမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်မယ်ထင်လို့ပါ။ အောက်မှာရေးထားတာတွေအတိုင်း တသွေမတိမ်းလိုက်လုပ်စရာမလိုပေမယ့် Beginnerတစ်ယောက်အတွက် Reasonable Stepတွေလို့ ထင်ပါတယ်။
၁) Can you legally invest/trade
အရင်Postတစ်ခုထဲမှာ ပြောဖူးသလို ကိုယ်Investလုပ်ချင်တဲ့ Marketမှာ Invest/Tradeလုပ်နိုင်တဲ့ Eligibilityရှိမရှိ သေချာသိဖို့လိုမယ်။ USမှာဆိုရင် SSN, Australiaမှာဆိုရင် TFNအစရှိသဖြင့် Minimum requirementလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်တော့မခက်ပါဘူး။ ကိုယ်က Brokerageတစ်ခုမှာ Account ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ Formမှာ ဘာတွေရှိရမလည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
၂) How much you can park it
ဘာမှမလုပ်ခင် သေချာတွက်ချက်ရမှာက ကိုယ့်မှာ Investingစလုပ်ဖို့ ငွေဘယ်လောက်ရှိမလည်း ဆိုတာပါ့။ စစချင်းလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် Medium Term Investingလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ Short Termလုပ်ဖို့က Skillနဲ့ အတွေ့အကြုံလိုသလို၊ Long Termလုပ်တော့လည်း ငြိမ်လွန်းပြီး ဘာမှသိပ် Learnဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Medium Term အနေနဲ့ ၁လကနေ ၃လလောက်အထိ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အချိန်တိုတခုအတွင်း မြတ်ရင် မြတ်သလို၊ ရှုံးရင် ရှုံးသလို Tradeကို Exitလုပ်တာ Beginnerအတွက် Practiceရပါတယ်။
ဘာကြောင့်Termကို ပြောနေရသလည်းဆိုတော့ ဒီLength of timeဟာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကို Marketထဲထည့်ထားရတဲ့ အချိန်မို့လို့ပါ။ ဒီတော့ ငွေAmountဟာ ကိုယ်ဘေးဖယ်ထားနိုင်မယ့် Amountဖြစ်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ နေ့တဓူဝ ကိစ္စတွေအတွက် ပြန်ပြန်ယူသုံးနေရမယ့် Quotaထဲကဆိုရင် Tradeတစ်ခုကို မလိုအပ်ဘဲ စောစောExitလုပ်နေရပါလိမ့်မယ်။ Recommendလုပ်တာကတော့ အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ကနေ ၁၀,၀၀၀လောက်အထိ စသင့်တယ်။ သိပ်နည်းလွန်းတော့လည်း ဘာမှကို မလူးလွန့်သာပါဘူး။
Brokerရွေးချယ်တာဟာ Beginnerတွေအတွက် အရမ်းအရေးမကြီးပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Tradeလုပ်မယ့် Frequencyနဲ့ Amountက နည်းသေးတော့ Brokerage Firmတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဒီလောက်ကြီး မသိသာပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ကိုယ်ပေးရတဲ့ Brokerageနဲ့ တန်တဲ့Serviceပြန်ရရဲ့လား ဆိုတာပါပဲ။ အမေရိကား Marketတွေအတွက် သင့်တော်မယ့် Broker review linkကို တွေ့ထားတယ်။ http://online-stock-trading-review.toptenreviews.com/။ အဲဒီ့Pageမှာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုFeatureတွေလိုမလည်း သေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ Top 1-5ဟာ မမှားနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ လက်ရှိTradeလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိရင် အဲဒီထဲက တစ်ခုခု သူတို့များ သုံးနေမလား မေးကြည့်ပါ။ Googleမှာ Brokerတစ်ခုချင်းစီအတွက် Detail Reviewတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ။
Brokerအများစုရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Account Openလုပ်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးရလေ့မရှိပါဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ Account Activateဖြစ်ဖို့ ငွေအနည်းဆုံး ဒီလောက်တော့ ထည့်ရမယ် ဘာညာလုပ်တတ်တယ်။ ဒီတော့ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်Cashအတွက် သူတို့ဘက်က ဘာGuaranteeပေးနိုင်သလည်း ကြည့်ရပါမယ်။ သူတို့Bankruptဖြစ်ရင် ကိုယ့်ငွေအတွက် Insuranceရှိရဲ့လား စသဖြင့်ပေါ့။ တချို့ရက်တွေမှာ Open Tradeမရှိပဲ ငွေသားချည်းရှိရင် ကိုယ့်ငွေက အတိုးဘယ်လောက်ရမလည်း သိကိုသိသင့်တယ်။ ပြီးရင် ATM card, Debit card Accessရှိမရှိ၊ မရှိရင်လည်း wire transferလုပ်ရတာ ဘယ်လောက် Convenientဖြစ်မလည်း သိရမယ်။ Brokerနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာကတော့ Brokerလို့ ဘာလို့ခေါ်လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုBrokeအောင်လုပ်နိုင်လို့ပါပဲး)
အားလုံး Setupလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အနည်းဆုံး Market Movementတွေကို စပြီးကြည့်လို့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ တကယ်Investမလုပ်ခင် ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတဲ့ 3Mကို သိရပါမယ်။ အပေါ်က ၁၂၃ကို စလုပ်နေပြီဆိုကတည်းက Mindsetကတော့ မဆိုးပါဘူး။ Methodအတွက်တော့ စာဖတ်ရမယ်၊ ပြီးရင် managementနဲ့ ပေါင်းပြီး တကယ့်အတွေ့အကြုံရှိအောင် လုပ်ယူရပါမယ်။ ကျွန်တော် ဒီBlogမှာ 3Mကို လှည့်ပြီး ရေးသွားမှာဖြစ်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို တဖြည်းဖြည်း 3Mနဲ့ Practical experienceတိုးပွားလာဖို့ အချိန်နဲ့ ငွေရင်းနှီးပြီး လုပ်ယူရပါမယ်။ It's not an easy job but it's very doable. စစချင်းTradeမယ့် Stockကိုရွေးဖို့ ကိုယ်သိတာကို ရွေးပါ။ ကိုယ်အနည်းဆုံး တဝက်လောက် နားလည်မယ့် Businessကို Runနေတဲ့ Stockကိုရွေးပါ။ Tradeမလုပ်ခင် Fundamentalနဲ့ Technical ပိုင်းကို သေချာAnalysisလုပ်ပါ။ ပြီးရင် Entry price, stop-loss price, profit-taking price, units to be boughtအစရှိတာတွေကို Planလုပ်ပါ။ ဒီTopicအားလုံးလိုလိုကို ဒီBlogမှာ တီးခေါက်မိအောင် ရေးပြီးပါပြီ။ ဆက်လည်းရေးသွားမှာပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဘယ်လိုစရမလည်း နည်းနည်းတော့ တီးခေါက်မိပြီထင်ပါတယ်။ Advisorနဲ့တွေ့တာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Advisorအများစုဟာ Insuranceနဲ့ Mutual Fundတွေပဲ ထိုးရောင်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးထက် Clientကျိုးကို ကြည့်တဲ့ Advisorကိုသိတယ်၊ Recommendလုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ တွေ့ကိုတွေ့သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြောသမျှကို နားထောင်ပြီး ထွက်လာရမယ့်အစား ကိုယ့်မှာ 3Mနည်းနည်းရှိရင် အနည်းဆုံး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနိုင်မယ်၊ သူပြောနေတာဟာ ကိုယ့်အတွက်လား သူ့အတွက်လား ပိုပြီး ခွဲခြားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 11/18/2009 11:03:00 AM2comments
Labels: 3M, broker, Management, methods, Mindset
Part I မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီPostမှာ Single-candle Formationတွေပဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်။ အောက်မှာ Formationတစ်ခုစီအကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
ဂျပန်တွေဟာ နာမည်ပေးကတော့ တော်တော် တော်တယ်။ နာမည်လေးတွေဟာ မှတ်ရလွယ်သလို အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်။ Shooting Star formationဟာ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် Bearish reversal signalကို ပေးပါတယ်။ ကြယ်ကျွေပါတယ်ဆိုမှ ကောင်းပါတော့မလား။ Shooting Starဟာ တကယ်တမ်းတော့ Hanging Manရဲ့ ပြောင်းပြန်ပုံစံပါ။ Up Trendတစ်ခုမှာ Upper Shadowရဲ့ Lengthဟာ Real bodyထက် နှစ်ဆအနည်းဆုံးပိုရှည်ပြီး Real bodyဟာ Lowနားကို ကပ်နေရပါမယ်။ Crowd Psychologyဟာ ဘာဖြစ်နိုင်မလည်း? ဆက်မဖတ်ခင် နည်းနည်းကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ Exampleအောက်မှာ Psychologyကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
Shooting Star formationကိုတွေ့တာနဲ့ လက်ရှိUp trendဟာ reverseဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားရပါမယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Long Upper Shadowဟာ Bullတွေရဲ့ ဈေးကိုဆွဲတင်တဲ့ Attemptကို ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်တော့ Bearတွေပဲ အနိုင်ရသွားပြီး Closeဟာ Highနဲ့မကပ်ပဲ Lowနဲ့သွားကပ်နေတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Upper Shadowရှည်လေ၊ Bullတွေဟာရဲ့ ကြိုးစားသမျှဟာ အချည်းအနှီးဖြစ်သွားလေဆိုတာ သဘောပေါက်ရပါမယ်။ Bullနဲ့Bearစစ်ပွဲမှာ Bullတွေအားပျော့လာပြီဆိုရင် ဘာကိုသတိထားရတော့မလည်း? Trend Reversal!!! Shooting Starရဲ့ Real bodyအရောင်ဟာ အရေးသိပ်မကြီးပေမယ့် အနက်ရောင်ဆိုရင် ပိုသတိထားရပါမယ်။
Belt-holdဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ Sumo Wrestling term "Yorikiri"ကနေဆင်းသက်လာပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ နပန်းသတ်နေတဲ့ Opponentရဲ့ ခါးပတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်းနဲ့ နပန်းစည်းဝိုင်းအပြင်ဘက်ကို ရောက်အောင်တွန်းထုတ်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Trading contextမှာတော့ Bullနဲ့Bearတို့ နပန်းသတ်တာ ဘယ်သူနိုင်တော့မလည်း အကဲဖြတ်တာပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း Down Trendနဲ့ Up Trendနှစ်ခုစလုံးအတွက် Belt-hold candleနှစ်မျိုးရှိတယ်။ Bullish Belt-holdနဲ့ Bearish Belt-holdလို့ မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Belt-hold candleတွေရဲ့ major characteristicကို ကြည့်ရအောင်။
Bullish Belt-hold candleဟာ down trendမှာ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ Openဟာ Lowနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပြီး Closeဟာ Highလောက်နီးပါး သွားပိတ်ပါမယ်။ Bearish Belt-hold candleဟာ up trendနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး Openဟာ Highနဲ့ အတူတူဖြစ်ရပါမယ်။ Closeဟာ Lowနဲ့ နီးပါးလောက် ပိတ်သင့်တယ်။ ဟာသနည်းနည်းမြောက်တဲ့ တခြားနာမည်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Bullish Belt-holdကို White Opening Shaven Bottomလို့လည်း ခေါ်ပြီး၊ Bearish Belt-holdကိုတော့ Black Opening Shaven Headလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
Belt-hold candleတွေဟာ Real bodyရှည်လေ၊ More reliableဖြစ်လေဖြစ်ပါတယ်။ Up Trend/Down Trendတလျှောက်မှာ ခပ်ဆင်ဆင် Same color, long real body candleတွေ မရှိရင်လည်း ပိုပြီးReliableဖြစ်ပါတယ်။ Belt-hold candleတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Crowd Psychologyကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ချန်ထားလိုက်တယ်။
Riskယူရဲတဲ့ Traderတွေကတော့ ဒီReversal Signတွေတွေ့တာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ Actionကို လုပ်တတ်သလို နည်းနည်းConservativeဖြစ်တဲ့ Investorတွေအနေနဲ့တော့ next day candleကိုကြည့်ပြီး ပိုသေချာတဲ့ Signalရအောင်စောင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် Candlestickတွေရဲ့ Powerကို နည်းနည်းတော့ မြည်းစမ်းမိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ Candlestick chartတွေကို Bar chartတွေနဲ့ အမြဲတွဲပြီး သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီPostတွေမှာ Steve Nisonရဲ့ Candlestick Techniques Referenceတွေကို Referလုပ်ပါတယ်။
Happy Candle Lighting!!!
Posted by Aung Myo Htet at 11/16/2009 11:48:00 AM 8 comments
Posted by Aung Myo Htet at 11/13/2009 08:12:00 PM 1 comments
ဒီPostကတော့ Passive Investorတွေထက် Active Traderတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Passive Investorတွေလည်း သိသင့်တယ်။ သတင်းစာတွေထဲမှာ သာမန်Middle Class Investorတွေကို ဘယ်လိုခေါ်လည်း ဖတ်ဖူးသလားတော့ မသိဘူး။ Mom-and-dad-investorတွေလို့ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ Mom-and-dad-investorတွေဟာ အများအားဖြင့် သူများဆီကရတဲ့ Tipတွေ၊ သတင်းစာထဲက Finance Sectionက Recommendလုပ်တာတွေကိုဖတ်ပြီး ကောက်ဝယ်လေ့ရှိတယ်။ အဲ ဝယ်ပြီးရင်တော့ အများစုဟာ ဘဏ်ထဲက ငွေလိုပဲထင်ပြီး ပစ်ထားလေ့ရှိတယ်။ Buy-and-pray Modelလို့လည်း တချို့ခေါ်ကြတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဘယ်လောက်ဈေးကျရင်တော့ ငါတော့ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီး Stop-loss targetမရှိတတ်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ မနှစ်ကလို Marketလည်းပျက်ရော၊ ပြန်တက်လာနိုးနိုးနဲ့ စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့ပဲ လုံးပါးပါးချင်ပါး၊ ဒါမှမဟုတ် မေ့ထားလိုက်ကြတယ်။ Mom-and-dad-investorတွေရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ မြတ်တာပဲမြင်ချင်၊ ကြားချင်တယ်။ ရှုံးခဲ့ရင် ဘာလုပ်ရမလည်းဆိုတဲ့ Plan Bကို သိပ်မတွေးတာများတယ်။
Professionalတွေ ဝယ်တဲ့စနစ်နဲ့ Mom-and-dad-investorတွေဝယ်တာ အရမ်းကွာတယ်။ Proတွေဟာ မဝယ်ခင်ကတည်းက ဘယ်လောက်အရှုံးခံမလည်းဆိုတာ ဦးဆုံးစဉ်းစားပြီးမှ ကျန်တာဆက်လုပ်တယ်။ ဘယ်လောက်အရှုံးခံမလည်းဆိုတာ Mom-and-dad-investorတွေထဲမှာလည်း စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေဘုယျတွက်လေ့ရှိတာကတော့ ဘယ်လောက်% ရှုံးခဲ့ရင် ရောင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာ ဝယ်ဈေးထက် ၅%၊ ၁၀% (သို့) ၁၅%ရှုံးခဲ့ရင်တော့ရောင်းမယ် အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။
Proတွေက ဘာပါထည့်စဉ်းစားလည်းကြည့်ရအောင်။ Proတွေဟာ သူတို့ရဲ့ Investment/Trading capitalကိုပါ ထည့်စဉ်းစားတယ်။ သေချာStock tradingမလုပ်ဘူးရင် ဒီConceptဟာ နည်းနည်းစိမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းတော့ တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ Proတွေဟာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Total Capitalရဲ့ 2%ကနေ 3%အထိပဲ Tradeတစ်ခုစီအတွက် Riskယူတတ်ကြတယ်။ ဥပမာ - Traderတစ်ယောက်မှာ $100,000 capitalရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဒါဆိုရင် သူဟာ ၂၀၀၀ကနေ ၃၀၀၀အထိပဲ အရှုံးခံဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါထက်ပိုပြီး Riskယူဖို့ လုံးဝPlanမရှိဘူး။
Main Idea behind this conceptကတော့ Traderတစ်ယောက်အနေနဲ့ Rule No.1 ဟာ Profitရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ Capital Preservationဟာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ ၂%ပဲ Riskရင် သူ့အတွက် နောက်ထပ်အကြိမ် ၄၉ခါ Tradeနိုင်ပါသေးတယ် - (၂% x ၅၀ကြိမ် = ၁၀၀%)။ ၃%ဆိုရင် ၃၂ခါကျန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Stock Priceပေါ်မှာ အရှုံးခံတဲ့ %ထက် Capitalပေါ်မှာ အရှုံးခံတဲ့ Amountက Survivalအတွက် ပိုအရေးကြီးတယ်။ Marketထဲကနေ Wash Outဖြစ်သွားတဲ့ Loserအများစုဟာ ဒီအကြောင်းကို ကြားတောင်မကြားဖူးတဲ့သူတွေ ဖြစ်ဖို့Chanceတော်တော်များမယ်။
အောက်မှာ Stock Priceပေါ်မှာရော၊ Capitalပေါ်မှာပါ Riskယူမယ့် %ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ဘယ်လောက် ဝယ်သင့်သလည်းဆိုတဲ့ Spreasheetလေးပြထားပါတယ်။ Capitalကို ၁၀၀၀၀လို့ Assumeလုပ်ထားပါတယ်။
Stock Price $ 30 30 30 30 30
acceptable loss as % of price 5% 10% 15% 20% 25%
acceptable $ loss over price 1.534.567.5
Capital $ 10000 10000 10000 10000 10000
acceptable loss as % of capital 3% 3% 3% 3% 3%
acceptable $ loss over capital 300 300 300 300 300
Position Size / Units / Volume 200.00 100.00 66.67 50.00 40.00
Position $ 6000 3000 2000 1500 1200
ဒီဥပမာကနေ ဘာကိုConclusionဆွဲလို့ရလည်းဆိုတော့ Capitalပေါ်မှာ Riskယူတဲ့Amountဟာ Fixedမို့လို့ Stock ပေါ်မှာ Riskများများယူတိုင်း ဝယ်သင့်တဲ့ Unitတွေ လျော့လျော့သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်မျိုးတွေးနိုင်တာကတော့ ကိုယ်က Stop-lossကို စောစောဖြတ်ရင် အစမှာ များများဝယ်နိုင်တာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Stop-loss သတ်မှတ်ပြီး လိုက်နာတာဟာ Professionalနဲ့ Mom-and-dad-investorတွေကြားက အဓိက ကွာဟချက်ပါပဲ။ Stop-lossကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံ၊ Stock priceနဲ့ Capitalပေါ်မှာ Riskယူမယ့် %ပေါ်မူတည်ပြီး Position sizeကွဲပြားသွားတာကို နားလည်ရမယ်။ Stop-lossမရှိရင် Helmetမပါပဲ ဆိုင်ကယ်စီးသလို လဲပြုခဲ့ရင် ပိုပြီးနာဖို့ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tradingမလုပ်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ Stop-lossနဲ့ Position sizeကို သေချာDefineလုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
PS : ဒီ့ထက် ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ Stop-lossလုပ်နည်းတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ရေးသွားပါမယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 11/09/2009 04:26:00 PM 1 comments
Labels: stop, stop-loss, Trading Plan
Posted by Aung Myo Htet at 11/04/2009 01:18:00 PM4comments
3Mထဲက Methodနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဆက်တိုက်ရေးလာလို့ အခုAnother Mဘက်ကို နည်းနည်းပြောပါရစေ။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီMအကြောင်း ပြောကိုမပြောရသေးပါဘူး။ Mindsetအကြောင်းအစချီပြီးသွားပြီ၊ Methodအကြောင်းလည်း Basicအချို့တော့ ပြောပြီးသွားပြီ။ 3Mကို လှည့်ရေးသွားမယ်လို့ အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အခုဒီPostမှာ Management အကြောင်းပြောပါမယ်။
Managementဆိုတဲ့ စာလုံးက တစ်လုံးတည်းနဲ့ တော်တော်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ Trader/Investorတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Managementတွေကတော့
၁) Trade Management
၂) Portfolio Management
၃) Tax Management
၄) Wealth Management အစရှိသဖြင့် အများကြီးရှိပါတယ်။ အခြားManagementတွေရှိပါသေးတယ်။ ဟုံသွားမှာစိုးလို့ အခုတော့ ဒီလောက်သိရင် လုံလောက်ပါတယ်။
Trade Managementကနေစရအောင်။ Tradeတစ်ခုကို ဘာများManagementလုပ်ဖို့လိုသလည်းလို့ ထင်ချင်ထင်မယ်။ ဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းတာများပေါ့။ သာမန်လူတွေဟာ အများအားဖြင့် သူများဝယ်ရင်လိုက်ဝယ်ပြီး၊ သူများရောင်းရင် လိုက်ရောင်းတယ်။ ဘယ်လောက်မှာ ဝယ်ပြီး၊ ဘယ်လောက်မှာရောင်းမယ်၊ ဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်မယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကိုင်ထားမယ်၊ ဘယ်လောက်အထိအရှုံးခံမယ် အစရှိတဲ့ Trading Planတော့ မရှိသလောက်ကို မလုပ်ကြဘူး။ မရှိတာထက် မသိတာလည်း ပါပါတယ်။ Trading Planတစ်ခုမှာ ပါကိုပါရမယ့် Main Fieldတွေကတော့
၁) Entry Price - ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ ဝယ်မလည်း
၂) Profit-taking price - ဘယ်လောက်မြတ်ရင် ရောင်းမလည်းဟာ ဒီဈေးကို သတ်မှတ်မယ်
၃) Stop-loss price - ဘယ်လောက်ရှုံးရင် ရောင်းမလည်းဟာ ဒီဈေးကို သတ်မှတ်မယ်
၄) If Entry price is not achievable with initial bids, how far you would go chasing it? - Entry Priceမရခဲ့ရင် ဘယ်ဈေးအထိလိုက်ပေးဝယ်မလည်း
၅) ဘယ်နှစ်ပတ် (သို့) ဘယ်နှစ်လ ကိုင်ထားမှာလည်း
အစရှိသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာတမ်းမေးပြီး၊ Stock Quoteနဲ့တကွ Record လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက ကိုယ့်ရဲ့ Trading Planကို ကိုယ် Followလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ Self-discipline မရှိရင် Traderမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Portfolio Managementဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Risk Toleranceနဲ့ အများကြီးပတ်သက်ပါတယ်။ ကိုယ်က Short term price fluctuationကို ဘယ်လောက်သည်းခံနိုင်သလဲ (Your stop-loss price)၊ ဘယ်လို Investment Typeတွေကို ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားသလည်း ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုSectorတွေကိုကိုယ်က ရင်းနှီးမြှပ်နှံချင်တာလည်းလည်း သိဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ - Conservativeနည်းနည်းဖြစ်တဲ့ Investorတစ်ယောက်ရဲ့ Portofolioတစ်ခုဟာ အောက်မှာပြထားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ့်က Riskများများယူရဲတဲ့သူဆိုရင် Propertyက လျော့သွားပြီး Stockတွေချည်းများများကိုင်တဲ့ Portfolioလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Asset typeတစ်မျိုးချင်းစီကမှ တခါထပ်ပြီး Sectorအလိုက် ထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ Sectorအမျိုးမျိုးခွဲပြီး Investလုပ်ထားတဲ့ Stock Portfolioတစ်ခုကို ပြထားပါတယ်။
General Rule of Thumbကတော့ Asset Typeများလေ၊ Sectorများလေ၊ ကောင်းလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ Diversified Portfolioလို့ ခေါ်လေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အများကြီးရှိစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုထဲ မည်းပြီးပိုက်ဆံတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာလည်း မကောင်းပါဘူး။ Asset Type သုံးမျိုးလောက်နဲ့ Stockအတွက် Sector သုံးမျိုးလောက်ဖြန့်ပြီး Investလုပ်ထားရင် Riskကိုလည်း Balanceလုပ်ထားရာရောက်မယ်၊ ကိုယ်လည်း Manageလုပ်ရသက်သာမယ်။
Tax Managementကတော့ လူအများစု အမြဲလျစ်လျူရှုထားတတ်တဲ့ areaပါ။ နှစ်ကုန်လို့ tax ရှင်းတော့ မြတ်နေရင်လည်း ပေးသင့်တာထက် ပိုပေးမိမယ်၊ ရှုံးရင်လည်း ရသင့်သလောက် tax offset/refundမရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ best ruleကတော့ investမလုပ်ခင်မှာ ဘယ်နာမည်နဲ့ဝယ်မလည်း ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ tax effectiveအဖြစ်ဆုံး နာမည်ကို ရွေးသင့်တယ်။ ဥပမာ - ကိုယ့်နာမည်လား၊ ကိုယ့်သားသမီးနာမည်လား၊ ကိုယ့်မိန်းမ/ယောင်္ကျားရဲ့နာမည်လား၊ ကုမ္ပဏီနာမည်လား၊ Trust fundရဲ့ နာမည်လား အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အကောင်းဆုံးက နာမည်ရှိတဲ့ Accountantနဲ့ တွေ့ ပြီး most tax effectiveဖြစ်မယ့် Structureကို ရွေးရပါမယ်။ tax lawတွေကို Accountantသိသလောက်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်သိရင် အကောင်းဆုံးပဲ။
Wealth Mangementနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ အခုပြောရင် နည်းနည်းစောနေလိမ့်မယ်။ ဥပမာတွေကတော့ ကိုယ့် Wealthကို ကာကွယ်ဖို့ ဘာInsuranceရှိသလည်း? ကိုယ့်ရဲ့ Investment Teamက ဘယ်သူတွေလည်း (Mortgage Broker, Accountant, Lawyer, Stock broker, Financial Adviser အစရှိသဖြင့်) သိရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Cashflowကို ကိုယ်ဘယ်လောက် Controlလုပ်နိုင်သလည်းကလည်း Wealth managementထဲမှာ ပါနိုင်ပါတယ်။
အချုပ်ပြောရရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တာမှန်သမျှဟာ 3M - Managementရဲ့ Introductionတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အသေးစိပ်တွေကို အလှည့်ကျရင် ပြောသွားပါ့မယ်။ သေချာဖတ်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထဲမှာ Preparationဟာ ထက်ဝက်မက လွှမ်းမိုးနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကပိုကရို၊ စည်းကမ်းသိပ်မရှိပဲနေလေ့ရှိရင်၊ Plannigလုပ်လေ့မရှိရင် Investorကောင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီPostဖတ်ပြီး လောလောဆယ်တော့ Stockတစ်ခုမဝယ်ခင် Trading Planလေး ချရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရေးရကျိုး နပ်ပါပြီ။
Posted by Aung Myo Htet at 11/02/2009 03:45:00 PM2comments
Labels: 3M, Management, Trading Plan
Posted by Aung Myo Htet at 10/23/2009 04:41:00 PM7comments
Posted by Aung Myo Htet at 10/20/2009 12:18:00 PM4comments